Ososayensi baqambe imbangela engaba khona yokushisa okungajwayelekile eSiberia - umagazini i- "Potato System"
Ososayensi bathole imbangela yokushisa okungajwayelekile eSiberia
NgoJuni 16, kwakhishwa umbiko ngeqembu lososayensi baseRussia nabaseYurophu (abamele iRussia, iBrithani, iFrance, iHolland, iJalimane neSwitzerland), abaphenya ngezimbangela zokushiswa “okushisayo” eSiberia ngoJanuwari-Juni kulo nyaka. Umsebenzi weqembu wenzeka ngaphakathi kohlaka lwe-United Nations Environment Programme futhi wahanjelwa ngamalungu e-International Panel of Resets on Climate Change (IPCC). Abaphenyi bafika esiphethweni sokuthi imbangela eyinhloko "yokushisa kwaseSiberia" yizinto ezenziwe ngabantu kanye nemiphumela yomsebenzi wezimboni zabantu.
NgoJuni 20 kulo nyaka, izinga lokushisa lomoya eSiberia Verkhoyansk, okungenye yezikhungo ezibandayo kule planethi, likhuphuke laya ku-38 ° C. Izinga lokushisa eliphakathi nendawo eSiberia kusukela ngoJanuwari kuya kuJuni lalingaphezu kwesilinganiso esihambisanayo sango-1981-2010 ngama-degrees ayi-5. Lesi yisibalo esiphakeme kakhulu eminyakeni eyi-130 sokubukwa.
Ngokwesakhiwo sohlelo lweWorld Weather Attribution, ososayensi abasebenzisa imodeli yesimo sezulu bathole ukuthi "ukushisa" okungafani nalolo hlobo kungakheka eSiberia uma kungekho zinto ezenziwe ngabantu kanye eminyakeni engama-80. Njengoba kunikezwe ukuphuma okukhulu kwamagesi abamba ukushisa, izinto ezinjalo kungenzeka ziphinde zivele ngaphambi kokuphela kwalelikhulu leminyaka.
Besebenzisa indlela yokwenza imodeli yezibalo, ochwepheshe babaliwe ukuthi kulawo ma-degree angama-5 okweqile kwesilinganiso sokushisa iminyaka eyi-130, okungenani ama-degree ama-2 "akweleta" ezintweni ezenziwe ngumuntu. Ngo-1900, umthelela "wokushisa waseSiberia" wawungaba namandla ama-2 degrees kunoJanuwari-Juni 2020.
Ukushisa kwaseSiberia kuzoba nomthelela omubi obonakalayo emvelweni okulesi sifunda. Kuzosheshisa ukuqothuka kwe-permafrost ezifundeni ezifika emaphethelweni, kuholele ekunciphiseni kwamahlathi nezinye izimila, ukuqubuka komlilo omkhulu wamahlathi, ukuvela kwezinkumbi ezinkulu zezinambuzane futhi kuzodala nezinye izinhlekelele. Ngokwengxenye ukushisa eSiberia sekudale izimo zenhlekelele yemvelo: ngoMeyi walo nyaka, ngenxa yokuncipha kwenhlabathi nokuqhekeka okwalandela ezindaweni zokugcina uwoyela esifundeni saseNorilsk, kukhiqizwe amathani angaphezu kuka-20 kaphethiloli enhlelweni yomfula iSiberia. Njengamanje, ihlathi livutha lapha ezindaweni ezinkulu.
Ososayensi bagcizelela ukuthi umsebenzi obaluleke kakhulu manje wukunciphisa ukuphuma kwamagesi abamba ukushisa emkhathini. Kungenxa yazo ukuthi izinga lokushisa eliphelele emhlabeni wonke ngasekupheleni kwekhulu le-XXI lingakhuphuka ngaphakathi kwamadigri ama-2, okuzoholela emiphumeleni emibi kakhulu emvelweni yomhlaba.
Tags: ukuguquka kwesimo sezuluamagesi abamba ukushisaISiberia
Inkinga yamazambane aseSakhalin icishe yaphela
Ukugoqwa kokudla okwenziwe nge-Biodegradable kwakhiwa e-Astrakhan